Qaramada Midoobay oo ka digtay dhibaatooyin baniaadamnimo oo…
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhibaatooyin Muuqda oo aan waxba laga qaban ay kataagan tahay dalka Yemen, maadaama ay ka jirto xaalad nolol xumo oo ka dhalatay dagaalka dabadheeraaday ee sababay in ay Isbadasho noloshada dad badan.
Xafiiska Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobay u qaabilsan Yemen ayaa sheegay in baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen dhibaatooyinka heysta 280 Kun oo ruux oo u dayacmay sabab ka dhalatay dagaalada dalkaas ka jira.
Waxa uu u dalbay lacag dhan $2.41 Milyan oo doolar si loogu iibiyo gargaarka bani aadamnimo oo xal u noqon kara kahortagga Cunno la’aan iyo macluul galaafata nolosha qoysas badan oo ku sugan Yemen.
Hay’adda ayaa sheegtay in kabadan 280 Kun ruux oo ay ku jiraan Qaxooti Soomaali ah oo waqti fog kunool Yemen ay ku jiraan qoysaska ciirsaday Deegaannada xasiloon si ay uga fogaadaan isku dhacyada dhinacyada hubeysan ee dagaalamaya.
Siddeedii ruux oo reer Yemen ah, hal qof ayaa ka barakacay, taasi waxa ay muujineysaa saamiga Baracayaasha inta uu gaasiisanyahay, muddo shan sano ma heystaan dadkaan kafaalo qaad nololeed oo joogta ah.
“Qoysas u dhigma 80% kuna sugan Yemen waxa ay la noolyihiin dhibaatooyin bani aadamnimo oo aysan ku lug lahayn sababta keentay, deegaanno ka baxsan halka ay ku noolaayeen sanado kahor ayay ka barakaceen, shaqo malahan, kalsooni amni ma heystaan, Waxbarasho habatilmaamin, dad intaas isugu darsamay nolol ceynkee ah ayay ku sugnaan karaan?”ayaa lagu yiri war kasoo baxay Guddiga Xuquuqul insaanka Yemen.
Yemeniyiin aan tira-koob rasmi ah lagaheyn ayaa kasoo gudbay Biyaha ay la wadaagaan Soomaaliya iyo Jabuuti, si ay uga badbaadaan dirirta dalkooda kasocota ee gacmaha shisheeye kulugta leeyihiin.
Berbera, Boosaaso, Kismaayo iyo Muqdisho waa dekedaha dhanka Soomaaliya ay kasoo galeen QaxootigaYemeniyiinta oo ay wehliyaan qoysas Soomaali ah oo dalka isaga tagay 1991 wixii kadambeeyay, xiligaas wadanka waxa uu galay dagaal sokeeye iyo dhibaatooyin bani aadamnimo.